Eyona Izixeko kwi-China kuba Intlanganiso Enye Abafazi
Ne-China ekubeni view-size ilizwe ukuba kunjalo, siyafuna ukuba umphandle ezimbalwa prime iindawo kuba intlanganiso beautiful, eyodwa, kwaye omnye Isitshayina abafazi ngaphakathi i-shanghai, kodwa kanjalo yayo dozens kwezinye prime kwaye commonly engaziwayo ubutyebi iindawo kakhulu. Xa kukho plenty ka-foreigners, incredible Isitshayina abafazi kwi-i-shanghai, kwaye omkhulu dating okanye nkqu malunga namathuba, oko ke, kubalulekile ukukhumbula ukuba ke mbasa ‘tourist indawo esembinbdini yevili’. Nangona oku kunokuba kakuhle kuba abanye, uninzi unako silindele uphezulwana kakhulu amaxabiso apha kuba nje malunga yonke into iindleko abahlala enxulumene kwaye abafazi ukuba commonly kuba kakhulu expensive incasa ngokunjalo. Omnye abe argue ukuba i-shanghai sele kuba Westernized, ngoko ke xa ke omkhulu kuba kuqala-ixesha, ezele ulwimi izikolo, kwaye intlanganiso entsha abahlobo okanye exploring i-nightlife ngayo ingabi kuba uninzi namanani ndawo kuba ingxowa yakho kuqala Isitshayina uthando okanye omnye umfazi. Hangzhou ebekwe yi-West Lake (Grand Canal), ngokunjalo Lijiang ebekwe kwi-Umzantsintshona of China ke Yunnan kwiphondo eyaziwayo kuba ababini kakhulu romanticcomment iindawo ukufumana uthando kwaye omnye Isitshayina abafazi. Ukuba ufaka kwi ngaphezulu yamandulo ukuva, amava, nenkcubeko ke Lijiang abe olugqibeleleyo. Kunye incredible sightseeing kwaye beautiful yezitena pathways kulo lonke town lento ngokuqinisekileyo indawo nento yokuba kufuneka silindele ukubona kwi Isitshayina romance wefilim. Oku town ugqibelele kuba abancinane iivenkile kwaye sele nasiphelo mountainous terrains ukuba adventure kwi, ngokunjalo sightsee. Abaninzi Isitshayina lovers yiya kweli beautiful ndawo ukuqala usapho kwaye nkqu vacationing, ngoko ke, ndibona couples kunye kule ndawo iza kuba ngokufanayo trend. Kufuneka wenze yenzala kwi-yamandulo Isitshayina beliefs kwaye myths nibe cinga experiencing i-romanticcomment town ka-Hangzhou.
Abaninzi beautiful, omnye Isitshayina abafazi ingaba rhoqo ebone ehamba malunga, philosophizing, kwaye dreaming zabo ngenye imini yinyaniso-uthando jikelele West Lake. Nangona i-Hong Kong babe ngathi ayixhasi namnye kakhulu ama-ngomhla wokuqala, kwaye intimidating ukuba lokuqala-ixesha, ngokuqinisekileyo sele kakhulu kunikela abakhenkethi abavela kumazwe angaphandle kwaye abantu ikhangela genuine Isitshayina uthando. Kukho plenty ka-kanye, educated Isitshayina abafazi apha ukususela zonke mbombo zone zeli. Ekugqibeleni, omkhulu isixeko ezifana oku, ngenene kuxhomekeke kuwe, yakho personality, kwaye apho okanye njani ukuba uzimisele funa omnye Isitshayina abafazi. Ukususela uncwadi lolwimi izikolo, malls ukuba supermarkets, ke ngokupheleleyo phezulu kuwe. Abaninzi Isitshayina abafazi ndinomsebenzi omkhulu fascination kunye foreigner abantu kwaye bafuna uthando ukusuka elahlukileyo uhlobo umntu ngaphandle into yabo azisa phezulu jikelele. Ngenxa yoku, ke, kokukhona isebenziseke ukukhetha phezulu enye Isitshayina kubekho inkqubela e a supermarket, ikofu-shop, okanye nkqu nje strolling noku street. Nje khumbula, kuba polite, ukuziqhelisa kwaye nazi kancinci Isitshayina ukuba kunokwenzeka, kuba genuine yakho yenza ingxenye yesakhelo neminqweno. Ke rhoqo wathi ukuba uhlobo umfazi indoda attracts uthi i-eyoyikekayo kakhulu malunga umntu ngokwakhe. Ukuba ukhe ubene kuyo ukukhanya-skinned, rhoqo mde, amagama amakhulu omnye Isitshayina abafazi ke Dalian zibe i-olugqibeleleyo iqala incopho kuba kuni. Oku umntla mpuma ngingqi China ngu ezaziwayo kuba yayo kakuhle-cultured Isitshayina abafazi asele kakhulu prideful, adventurous, amagama amakhulu, kwaye nkqu elizimeleyo.
Ezi qualities ingaba iqhosha kuba abo bamele ezama ukuphepha ‘igolide-diggers’
Nangona ezi abafazi kuba mkhulu incasa kwi-ukutya kwaye fashion, abaninzi ingaba mna-ukutya adventure seekers. Ingaba i-ukuba neentloni uhlobo, okanye mhlawumbi uhlobo guy lowo ufuna a ukuba neentloni Isitshayina omnye umfazi? Ngoko Suzhou zibe i-olugqibeleleyo kuqala tourist engqongileyo. Abaninzi argue ukuba ezinye ezininzi ubufazi, beautiful, sweet, kwaye genuinely affectionate abafazi ingaba bred apha Suzhou. Ezi Isitshayina abafazi eyaziwayo kuba kakhulu loyal, esinenkathalo, kwaye compassionate lovers ukuba kuya kusoloko intonga yakho nge icala, angenise ukuba entsha abahlobo, yena nosapho lwakhe, kwaye entsha adventures.
Kufuneka wenze sele
lucky ngokwaneleyo ukuba sikhubeke phezu yakho entsha enye Isitshayina lover, Sonya zibe i-olugqibeleleyo indawo ukuya kuthabatha lover kwi omtsha adventure.
Sonya sele xa – ebukeka amalwandle kwi-China kwaye uninzi enqwenelekayo imozulu climates
Iphezulu ukuba, nkqu ukuba ubungeka zifunyenweyo enye Isitshayina umfazi kanti ke, kukho plenty ka-kanye Isitshayina abafazi ebekwe kwi-Sonya ukuba ingaba ukhangela ukwenza entsha abahlobo kunye kusenokwenzeka ukuba ahlangane zabo kuqala kwaye yokugqibela ‘omnye inyaniso uthando’. Xa kukho nasiphelo iindawo, amaphondo kunye ezinemigodi ezingama-China ukukhetha ukusuka kwi-ezama ngaphandle a beautiful, omnye Isitshayina umfazi, ke soloko kucetyiswa ukuba sizame ngamnye ndawo kwiintsuku ezimbalwa ukuba kunokwenzeka, ukuzama yakho comment olulolunye acclimating ngokwakho ukuba ezahlukeneyo subcultures ka-Isitshayina abafazi ngamnye wabo ngingqi, kwaye oko kufuneka kunikela personality kwaye romance ngobulumko
← Abantu babefuna kuba Isitshayina millionaire omnye ladies - Telegraph
Indlela kuhlangana Isitshayina girls - Ividiyo Dating →